2016ပြီလ 40 | 90 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 40)
သဟဇာတမိုးတိမ်မှ VOS ယူ
နှစ်ဦးကနယူးတိမ်တိုက်ယဇ်ကိုပြုရမည်လက်ငင်းအခွန် Generate နှင့် CAPEX San Jose, ကာလီဖိုးနီးယားကိုလျှော့ချဖို့ Service Providers ဖွင့်ပေးခြင်းအခြေခံကျကျအပြောင်းအလဲများကိုလည်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့် Live နှင့် VOD အကြောင်းအရာများအတွက် Delivery - ဧပြီလ 13, 2016 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင် အခြေခံအဆောက်အဦများ, ယနေ့မိုဃ်းတိမ်စွမ်းအားဖြင့်သစ်နှစ်မျိုးကို VOS (TM) ဟာယပူဇော်သက္ကာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သဟဇာတဆုရ VOS software ကို-based တစ်ခု extension ကို ...
Broadpeak, အာလဖကွန်ယက်နှင့် Squadeo Multiscreen ဗီဒီယို Delivery ရိုးရှင်းနှင့် QoE ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်တပ်ဖွဲ့ကို Join
RENNES, ပြင်သစ် - ဧပြီလ 12, 2016 - Broadpeak, လစာတီဗီအော်ပရေတာနဲ့ content provider များကိုများအတွက်အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ရက် (CDN) နည်းပညာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ပြုလုပ်အာလဖကွန်ယက်အတူတက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည်တစ်ခုဆန်းသစ်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ CMS သို့အာရုံစိုက် / CRM ပြန်-ကြီးစွန်းနှင့် Squadeo, ဗီဒီယိုကစားသမားတစ်ဦးကိုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, များအတွက်ပြည့်စုံ turnkey ဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန် ...
နယူး StreamScope EM-50 လုပ်ငန်း Manager ကိုအတူ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် Simplified QoS စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်လေးစားလိုက်နာခြင်း
ဧပြီလ 1.0, 3.0 - - ဗဟိုမှဗီဒီယိုအရည်အသွေး Manager ကလူငယ်ကဏ္ဍ Princeton, NJ များအတွက်ချောမွေ့ရွှေ့ပြောင်းရှိစေရေး, ATSC 12 နှင့် ATSC 2016 architecture ထောက်ပံ့သည့် 2016 NAB ပြရန်မှာတဲ SU15402, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆိုပါ StreamScope (R) EM-50 လုပ်ငန်းမန်နေဂျာဖွင့်လိမ့်မည်, ATSC 1.0 နှင့်အနာဂတ် ATSC 3.0 ဗိသုကာအတွက်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့်လိုက်နာမှုအစိုးရများ streamlines တဲ့ဗဟို software ကိုဖြေရှင်းနည်း။ StreamScope ...
NUGEN အသံ Dolby (R) Atmos နှင့်အပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းနေရာချထားခြင်းအဘို့အပြည့်အဝထောက်ပံ့အတူ Halo Upmix များအတွက် 9.1 Option ကိုဦးလွတ်မြောက်
Leeds, ဗြိတိန် - ဧပြီလ 12, 2016 - ထို 2016 NAB ပြရန်မှာ NUGEN အသံကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခု 9.1 option ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် Halo Upmix plug-in ကိုချီးကျူး။ တစ်ဦးဦးဆောင်စတီရီယို upmix ဖြေရှင်းချက် NUGEN အသံ overhead positioning ကိုလည်းပါဝင်သည်သော 9.1 upmix option ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီများသည်အကြားဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ် Halo Upmix ထူထောင်သောသဲ algorithms အပေါ်အဆောက်အအုံ ...
NAB 2016: Fujifilm'S နယူး UA13x4.5 Wide Angle က Ultra HD ကိုမှန်ဘီလူး2/3လက်မအရွယ် 4K ကင်မရာများကိုမှအပြည့်အဝ Optical အရည်အသွေးများရရှိစေ
ENG နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအညွန့်, နယူး 4K မှန်ဘီလူးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော Precision စက္ခုဗေဒ, HDR နှင့်အထင်ကြီး Linear ဝိန်း, NJ ပေါင်းစပ် - လာမည့် NAB ပြရန်မှာ Fujifilm မြောက်အမေရိက၏ Optical ဖုန်းများအတွက်တိုင်းဟာ FUJINON UA13x4.5 ကျယ်ပြန့်ထောင့်က Ultra HD (UHD) မိတ်ဆက်ပေးဦးမည် မှန်ဘီလူး။ 4K +2/3"မှန်ဘီလူး၏ကုမ္ပဏီ၏ပထမတန်းစား UA စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းသည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအထူးဒီဇိုင်း ...
GatesAir 3.0 NAB Show မှာ ATSC 2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုခင်းကျင်းပြပေးဖို့
လာမယ့်မျိုးဆက်အခြေခံအဆောက်အအုံတခုအဖြစ်မှ NAB နှင့် LG နှင့်အတူဆန္ဒပြပွဲများသည် ATSC 3.0 အကူးအပြောင်း Cincinnati, ဧပြီ 15, 2016 အတူပါလာသည်ဟုစားသုံးသူ-facing အခွင့်အလမ်းများ - GatesAir, ကြိုးမဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အ Over-the-air အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ ထုတ်လွှင့်, တနင်္လာနေ့စတင်မ 3.0 NAB Show မှာအတော်ကြာ ATSC 2016 ဆန္ဒပြပွဲများအထောက်အကူပြုများစွာထွန်းသစ်စစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုပြ, နှင့်အသစ်ပါလိမ့်မယ် ...
မျက်မှောက်ရေးရာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်တုတ်မှ Interra စနစ်များထည့်သွင်းပေး Multi-ဘာသာစကားအသံထောက်လှမ်းခြင်း
CUPERTINO, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဧပြီလ 12, 2016 - ထို 2016 NAB ပြရန်မှာတဲ SU7105, Interra စနစ်များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းမှ software များထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ၎င်း၏တုတ် (TM) အတွက်ပိုကောင်းအသံဖိုင်ဘာသာစကားထောက်လှမ်းစွမ်းရည်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် automated, ဖိုင်-based QC ဖြေရှင်းချက်။ တုတ်ဖို့ updates များကိုအဆိုပါစနစ်များကိုအပေါ်သို့စာတန်းထိုးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့စာတန်းဖိုင်များကိုဘာသာစကားစိစစ်အတည်ပြုဘို့ Pre-တည်ဆဲထောက်ခံမှုတိုးချဲ့ ...
NAB 2016 မှာ linear Acoustic®ဟန်ပြမယ် Audio-ကျော်-IP ကို ​​TV ကထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions ပြီးတော့ပါဝင်သူရည်ရွယ်ခုနှစ်တွင် (IP ကိုမီဒီယာ Solutions သည်မဟာမိတ်အဖွဲ့) အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆန္ဒပြ
Las Vegas, ဧပြီ 18, 2016 - NAB 2016 @ အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါရည်ရွယ်: ဇန်နဝါရီ 2016 များတွင်အဆိုပါ Telos မဟာမိတ်ကုမ္ပဏီများအမြတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်စံချိန်စံညွှန်းများချဉ်းကပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံဘဲ, IP ကိုမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့, ရည်ရွယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် IP ကိုကျော်မီဒီယာဖို့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့အကူးအပြောင်း။ က The Telos မဟာမိတ်အဖွဲ့တီဗီလက်မောင်းကိုယ်စားပြုကော်မတီ ...
40 ၏စာမျက်နှာ 90«ပထမဦးစွာ...102030«3839404142 » 506070...နောက်ဆုံး»